Saraakiil Ajnabi ah oo baaraya Madaafiicdii ku dhacday Wadajir | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Saraakiil Ajnabi ah oo baaraya Madaafiicdii ku dhacday Wadajir
Saraakiil Ajnabi ah oo baaraya Madaafiicdii ku dhacday Wadajir
Ciidanka Booliska Soomaaliya ee sida gaarka ah loogu tababaray Baarista Qaraxyada ayaa ku hawlan Baarista tiro Madaafiic ah oo saakay ku dhacday Xaafadda Abasiibka oo ku dhaw Xerada Xalane ee Degmada Wadajir.
Madaafiicdka ku dhacday degmada Wadajir oo tiro ahaan lagu qiyaasay ilaa Lix xabo ayaa waxaa ku geeriyooday Afar qof, halka ay ku dhaawacmeen Sideed qof oo kale oo ay ku jiraan caruur dhiganeysay Dugsi Qur’aan.
Saraakiil Cadaan ah oo ku sugan Xarunta ciidamada Midowga Afrika AMISOM ee Xalane oo Booliska qaybta Baaritaanada ka caawiya ayaa sidoo kale qayb ka ah hawsha Baarista ah ee socota,
Ciidamada Booliska ayaa maanta gelinkii dambe la arkayay iyaga oo tagay guryihii ay ku dhaceen Madaafiicda, kadibna calaamadeeyay goobaha ay ku dhaceen Madaafiicda, saraakiisha cadaanka ah ayaa qaatay aaladaha yar yar ee biraha ah halkaasi yaallay, kana dhashay Hoobiyeyaasha.
Sidoo kale saraakiisha khubarada ah ee baaritaankan horkacayay ayaa la arkayay iyaga oo su’aalo ka weydiinaya arrintan shacabkii halkaasi ku sugnaa iyo Ciidamadii halkaasi ka akdhawaa.
Baaritaankan oo ah mid caalami ah oo la mid ah midka aduunka lagu baaro Madaafiicda nuucaan oo kale ah, ayaa Booliska wuxuu weli ku guda jiraa cadeynta sida ay wax ku dhaceen.
Inta badan baaritaanada nuucaan oo kale ah ayaa waxa ay yihiin kuwa aanay natiijo ka soo bixin, maadaama saraakiisha cadaanka ah baaritaanada ay sameeyaan aysan la wadaagin dowladda gaar ahaan laamaheeda ammaanka.